Bernie Sanders oo Ruushka uga digay ‘inuu ka fogaado doorashooyinka Mareykanka’ |
Musharada rajaynaya inuu Xisbiga Dimuqraadiga ku matali doono tartanka madaxtinimada waddanka Mareykanka Bernie Sanders ayaa waxa uu waddanka Ruushka ku cambaareeyay iskudayga la sheegay inay ku doonayaan inay gacan ka siiyaan ololihiisa, isagoo u sheegay “inay faraha kala baxaan doorashada Mareykanka”.
Mr Sanders ayaa Jimcihii sheegay in saraakiil Ameerikaan ah ay bishii la soo dhaafay u sheegeen dedaallada Ruushka uu ku doonayo inuu ku caawiyo ololihiisa.
Isagoo ka hadlayay Bakersfield, California, ayuu Mr Sanders waxa uu sheegay in aanay caddayn sida Ruushku uu ku doonayo inuu doorashada ku farageliyo.
Hasayeeshee senatorkan 78-jirka ah ee laga soo doorto gobolka Vermont, ayaa sheegay inuu si xooggan uga soo horjeedo iskudaykasta oo sidaas lagu sameynayo.
Waxa uu Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku dhaleeceeyay inuu yahay “tuug kaligii-taliye ah” kaas oo ay dowladdiisa “borobagaando dhinaca internetka ah u isticmaashay si ay dalkayaga u kala qaybiso”.
“Aanu qeexno, Ruushku waxa uu doonayaa inuu na kala qeybiyo oo waxba kama jiraan ka soo qaado dimuqraadiyadda Mareykanka, anigu ma ihi madaxweynaha haatan talada haya, sidaas daraadeed waxaan aad uga soo horjeedaa dedaalladaas iyo quwadkasta ee kale ee ajnabi ee doonaysa inay faragaliso doorashooyinkeenna,” Mr Sanders ayaa yiri.
Mr Sanders, ayaa haatan lagu tirinayaa inuu ugu cadcad yahay musahraxiinta Xisbiga Dimuqraadiga ee doonaya inay xisbigaas ku matalaan tartanka madaxtinimada ee Mareykanka.
Shirkadda Facebook-ga ayaa sheegtay in aanay wax caddayn ah u hayn in Ruushku uu gacan siiyay ololaha doorashada Sander.
Jimcihii ayaa wargeyska The Washington Post waxa uu daabacay in Madaxweyne Donald Trump iyo xildhibaanno kale oo dalkaas ah loo sheegay dedaaladda Ruushka ee ah inay gacansiiyaan Mr Sanders.
Sarakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale rumaysan in Ruushku uu doonayo inuu farageliyo doorashada bisha Nofeembar iyagoo doonaya inay Madaxweyne Trump ka caawiyaan inuu guulaysto.
Xubnaha Guddiga Sirdoonka ee Aqalka Kongareeska ayaa shir ay albaabada u xiran yihiin waxaa 13-kii bishan Febraayo loo sheegay in Ruushku uu doorbidaayo Mr Trump.
Madaxweyne Trump oo ka hadlayay isu soo bax doorasho oo Jimcihii uu ku qabtay gobolka Nevada ayaa waxa uu sheegay in xogta ah in Ruushku uu faragalinayo doorashada ay aheyd “xog aan sugnayn” taas oo ay bilaabeen Dimuqraadiyiinta.
“Waan arkaa taleefannadaas, Dimuqraadiyiintan aan wax qabsan karin, waxay sheegeen in maanta Putin uu doonaayo inuu xaqiijiyo in Trump dib loo soo doorto. Halkaas howsha haka wadaan,” Mr Trump ayaa yiri.